Ahoana no hanjanaka Mars - News Fitsipika
Ahoana no hanjanaka Mars
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Ahoana no hanjanaka Mars” dia nosoratan'i Sara Bruhns sy Jacob Haqq-Misra, fa theguardian.com ny alakamisy 5 Novambra 2015 10.40 UTC
NASA Namoaka ny tatitra iray misy tsipiriany planina ho an'ny asa fitoriana any Mars olombelona. Izany no lava-nitsangana tanjona ho an'ny NASA sy ny tatitra manoritra ny zava-tsarotra ny Mars fitrandrahana amin'ny dingana telo. Ny voalohany, 'Tany mizaka', Mifantoka amin'ny fikarohana dingana ambony sambo ny International Space Station. Ny 'Manaporofo Ground' dingana lalina kokoa nametraka ny olombelona ho toerana ho an'ny fikarohana, nefa andro vitsivitsy sisa tavela avy tany. Ny 'tany Independent' dingana mamarana ny drafitra ny mahazo ny olona ny eny amin'ny planeta Mars.
Tsy NASA ihany no fikambanana miomana handefa ny olona any amin'ny planeta mena. SpaceX, Dennis Tito ny Fitaomam-panahy Mars Foundation, ary Mars iray rehetra naneho ny tanjona mba hitsidika sy amin'ny toe-javatra sasany aza hanjanaka Mars.
Alohan'ny misy firenena na fikambanana manomboka trandrahana sy ny fametrahana tanàna, ambiguities amin'ny lalàna iraisam-pirenena momba ny toerana fitrandrahana sy ny ponenana tokony nanazava ary tapa-kevitra. Ny mety ho fandaniana, ara-bola sy ara-politika, ny tsy firaharahana izany adihevitra momba ny zo hitondra amin'ny habakabaka dia ambony loatra ny hamela ireo iraka drafitra mba hampitombo be kokoa.
Amin'izao fotoana izao no toerana fitrandrahana politika amin'ny ankapobeny voafaritry ny Space ivelany Fifanarahana, voasoratra ao 1967. Io fifanarahana mihidy ny sonia avy amin'ny fametrahana fitaovam-piadiana mahery vaika ao amin'ny habakabaka, mametra ny fampiasana ny toerana ho milamina tanjona, mandrara misy firenena avy any nilaza tany amin'ny misy kintana (fantatra amin'ny hoe 'tsy fahazoany fitsipika'), ary manamafy fa ny toerana no 'ny faritanin'i olombelona rehetra'.
Space ivelany fifanarahana olombelona nosoratana teo anatrehany niantsona teo amin'ny Moon, araka ny Ady Mangatsiaka fihenjanana nitaingina, ary toy izany koa dia zara raha ampy fitaovana mba hitarika ny Mazava ho azy fa ny habakabaka fitrandrahana. Maro fepetra fifanarahana ity dia Azo antoka fa ilaina, toy ny fandrarana ny fitaovam-piadiana mahery vaika, ary ny fampiasana ny toerana ho an'ny tanjona am-pilaminana ihany. Na izany aza, ny famerana tanteraka amin'ny mpanjaka filazana ny tsy fahazoany fitsipika mety hitarika ho amin'ny ho avy ady.
Raha feno tsipiriany olombelona tolo-kevitra na inona na inona asa fitoriana ho Mars (na-panjakana na tsy miankina) Mbola eo ambanin'ny fampandrosoana, ny fototra horaisintsika ny nanjana, araka izay mifanohitra amin'ny fotsiny trandrahana, manangana ahiahiny. Ny tsy fahazoany fitsipiky ny fifanarahana Space ivelany mandrara ny 'fahazoany ny fitakiana ny fiandrianam, amin'ny alalan'ny fampiasana na ny fibodoana, na amin'ny zavatra hafa dia midika hoe '. Izany dia toa manondro fa ny asa fanjanahantany mihitsy dia tsy mifanaraka amin'ny fifanarahana. Fomba fikambanana ireo mikasa hanjanaka tsy milaza fiandrianan'i no ho voavaha olana sy zava-dehibe mba hanapa-kevitra eo alohan'ny hipetraka amin'ny Mars.
Iray mety fomba hamahana izany dia amin'ny alalan'ny mifantoka amin'ny ara-toekarena filazana ny loharanon-karena ao amin'ny Mars, fa tsy ny tany mihitsy. Miankina sy tsy miankina antoko mety Mars tany izy tamin'izany ary hanorina lehilahy iray tena ratsy izay firenena ny lalàna dia mihatra amin'ny mponina sy ny mpitsidika rehetra-mitovy amin'ny efa misy fepetra ara-dalàna izay mifehy ny International Space Station. Afaka ihany koa ny hanorina tsikombakomba voafetra ny tany izay mety milaza manokana ny fitondran-tena ara-toekarena zo sy ny siansa. Na izany aza, toy izany "faritra ara-toekarena manokana 'dia tsy misy filazana ny fiandrianam. A Mars mponina avy amin'ny zanatany mety handeha am-pilaminana amin'ny alalan'ny ireo faritra, ary mety dia nanangana pototry ny iray hafa ny. Na izany aza, extractable harena rehetra voarakitra ao anatin'ny faritra dia ny zo manokana mpitory tany am-boalohany. Tolo-kevitra ity dia manome fomba iray fahafaham-po ny loharano-nanangona tanjona ny maro amin'izao fotoana izao Mars asa fitoriana, fahazoan-dalana mikasa ny fanjanahantany 'zao, ary hanatanteraka ny fepetra takiana any ivelany Space Fifanarahana.
Maro mpanohana ny Mars fanjanahantany misiona manohitra fa ny asa fitoriana toy izany no irreversibly mandoto ny tontolo iainana voajanahary ny Mars, manimba fikarohana siantifika ary koa ny marring ny voajanahary tsara tarehy ny planeta. Mba hiadiana ireo ahiahy, ny planeta zaridaina rafitra mitovy amin'ny tany ny rafitra valan-javaboary mety ho tafatoetra tsara. Planeta zaridainam-panjakana no hamantarana sy nifehy araka ny torohevitra ny tany ny mpahay siansa eran-tany-taorian'ny marimaritra iraisana modely manamorona ny andalana ny Ny decadal NASA fanadihadiana noho ny fisafidianana toerana asa fitoriana. Misy valan-javaboary mety hisokatra mikatsaka afa-tsy ny siansa, raha ny hafa kosa mety ho fanendrena hatsarana fotsiny mba hiarovana Mars 'ny tontolo iainana voajanahary.
Nanaiky teo amin'ny drafitra toy izany afaka manome fomba milamina hatrany. Na izany aza, misy kely foana ady eo amin'ny mpanjanaka, indrindra fa raha ny tsy fahazoany fitsipika dia ny mihazona miaraka amin'ny fanjanahantany, toy ny tsy misy firenena na fikambanana dia ho afaka ny hampiasa tanteraka ny fanaraha-maso ny faritra ara-toekarena manokana. Ny rafitra fitsarana vonjimaika dia mety ho tsara mba handaminana tsy fifanarahana eo amin'ny voanjo ao amin'ny Mars tsy mahakasika ny Fitsarana Iraisam-pirenena eto an-tany. Rehefa zanatany roa tonga any ady amin'ny tsirairay, ny raharaha dia mety ho re sy vahana amin'ny alalan'ny iray ahitana ny solontenan'ny fitsarana ny hafa zanatany. Modely io dia mamela ny fanjanahantany tombontsoa mba ho voaro amin'ny famahana disadisa ihany eo amin'ny mpanjanaka.
Ny drafitra voalaza ambony dia fomba iray azo atao hatrany. Na izany aza, dia zava-dehibe ho an'ny firenena sy ny fikambanana mba hiditra ao amin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny fomba hanohy. Misy drafitra hanjanaka Mars tsy niresaka ny fomba dia miatrika ny raharaha momba ny fitakiana ny. Fa misy fikambanana eo ambany fahefana firenena iray antoko ho Space fifanarahana ivelany dia mila ny Fifanarahana hitoetra ny stipulations. Angamba ny vahaolana dia ny handinika indray ny fifanarahana, indrindra fa ny tsy fahazoany fitsipika, ary hanapa-kevitra raha toa ka fitakiana ity dia mbola ilaina amin'izao andro izao. Na angamba ny vahaolana dia ny hanitsy ny fifanarahana mba hanapa-kevitra mazava tsara eo amin'ny fomba ponenana. Ny amin'izao fotoana izao toe-javatra tsy mazava loatra, ary ny ady raha tsy toa azo ihodivirana ny fitondrana no nanapa-kevitra fanjanahantany eo anoloan'ny olombelona voalohany tonga ao amin'ny Mars.
Sara Bruhns Nianatra Fizika sy ny astronomia ao amin'ny Oniversiten'i Virginia. Izy fanadihadiana ny amin'ny fiandrianam-pirenena amin'ny Mars amin'ny Jacob Haqq-Misra (haqqmisra) ny alalan 'ny Young Mpahay Siansa Program ao amin'ny Blue marbra Space Institute ny Science. Ny hevitra eto dia ny mpanoratra 'irery.
Navoaka tamin'ny alalan'ny ny Guardian News Feed plugin fa WordPress.
33256	0 Article, Kolontsaina, Film, Mars, Matt Damon, siansa ara-politika, Science, Science bilaogy Network, Space
← Ny Appliances, no mandroba ry jamba, Manohitra! Amazon Fire HD 10 famerenana: nanapaka ny ratsy manaporofo zorony iray lafo vidy fahadisoana →